သင်သည်သင်၏မူပိုင်ခွင့်ရထားသည့်အလုပ်မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုဥပဒေနှင့်ဤ site ပေါ်တွင်သုံးစွဲနိုင်သောလမ်းအတွက်ကူးယူထားပြီးကြောင်းယုံကြည်ပါ, သင်တို့သည်ငါတို့၏မူပိုင်အေးဂျင့်ကိုအကြောင်းကြားစေခြင်းငှါ, ၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ထောင်စုနှစ်မူပိုင်အက်ဥပဒေထဲမှာထွက် set အဖြစ် 1998 (DMCA). သင့်ရဲ့တိုင်ကြားချက်များအတွက် DMCA အောက်မှာတရားဝင်ဖြစ်ဖို့, ပြောဆိုထားသည်မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှု၏အသိပေးစာပေးတဲ့အခါသင်အောက်ပါအချက်အလက်တွေကိုပေးရမညျ:
* ချိုးဖောက်ခံရဖို့အခိုင်အမာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ချိုးဖောက်မှုလှုပ်ရှားမှုများ၏ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြောင်းကိုဖယ်ရှားခံရဖို့သောပစ္စည်း identification.
* အဆိုပါဝေဖန်ပြောဆိုပါတီဆက်သွယ် service provider ကခွင့်ပြုမှကျိုးကြောင်းဆီလျော်လုံလောက်သောသတင်းအချက်အလက်များ, ထိုကဲ့သို့သောလိပ်စာအဖြစ်, တယ်လီဖုန်းနံပါတ်, နှင့်, ရရှိနိုင်လျှင်, အီလက်ထရွန်းနစ်မေးလ်လိပ်စာ.
* ကောင်းသောယုံကြည်ခြင်း၌၎င်းဝေဖန်ပြောဆိုပါတီ "ထုံးစံများတွင်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုညည်းညူကိုယုံကြည်သောသူတစ်ဦးကကြေညာချက်မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်ခွင့်ပြုချက်မရ, ၎င်း၏အေးဂျင့်, သို့မဟုတ်တရား ".
* အဆိုပါ "ဟုအဆိုပါအကြောင်းကြားစာအတွက်သတင်းအချက်အလက်တိကျမှန်ကန်ဖြစ်ပါတယ်" အဲဒီတစ်ဦးကကြေညာချက်, နှင့် "မုသားသက်သေခံမှု၏ပြစ်ဒဏ်အောက်မှာ, အဆိုပါဝေဖန်ပြောဆိုပါတီ "ချိုးဖောက်သည်ဟုစွပ်စွဲခံရကြောင်းတစ်ခုသီးသန့်ညာဘက်၏ပိုင်ရှင်၏ကိုယ်စားဆောင်ရွက်ရန်ခွင့်ရှိပါသည်.
အထက်ပါသတင်းအချက်အလက်ရေးသားထားသောအဖြစ်တင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်, အောက်ပါ Designated အေးဂျင့်မှ faxed သို့မဟုတ်မေးလ်ပို့ပေးသတိပေးချက်:
ခွင့်ပြုပေးပါ 1-2 အီးမေးလ်တစ်စောင်တုံ့ပြန်မှုကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရက်ပေါင်း. ထိုကဲ့သို့သောကျွန်တော်တို့ရဲ့ Internet Service Provider ကဲ့သို့သောအခြားပါတီများရန်သင့်တိုင်ကြားချက်အီးမေးလ်ပို့ခြင်းသင့်ရဲ့တောငျးဆိုခကျြအလျင်စလိုမည်မဟုတ်ခြင်းနှင့်စနစ်တကျတင်သွင်းခံရမတိုင်ကြားချက်ကြောင့်နှောင့်နှေးတုန့်ပြန်မှုစခွေငျးငှါသတိပြုပါ.
Tube Research Software v1.0 Free Download
VLC က Stream and Remote APK ကိုဒေါင်းလုပ် | …
Badoo 4.9.1 APK ကို
Royale ထိပ်တိုက်တွေ့ 1.2.3 APK ကို | အကောင်းဆုံး Download…
Superstar SMTOWN APK ကိုဒေါင်းလုပ် | အကောင်းဆုံး Apps ကပ…
ColorNote ကို Notepad မှတ်စုများ v3.6.6 – APK ကို Download လုပ်ပါ